Women's Health (Part 2) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Women’s Health (Part 2)
ပြိုမတေို့မမေးရဲတဲ့ ပြိုမတေို့အကွောငျး (၂)
‘ အမြိုးသမီးသုံးသနျ့စငျဆေးရညျတှေ နစေ့ဉျသုံးဖို့လိုအပျရဲ့လား?’
ပြိုမတေို့ရဲ့ ရခြေိုးခနျးထဲမှာ အမြိုးသမီးသနျ့စငျသုံးဆေးရညျတှရှေိနှငျ့နပွေီလား?
ဒီဆောငျးပါးလေး အဆုံးထိဖတျပွီး အမြိုးသမီးသုံးသနျ့စငျဆေးရညျတှေ နစေ့ဉျသုံးသငျ့/မသုံးသငျ့ ပွနျလညျသုံးသပျကွညျ့ပါဦးနျော!
ပထမဦးစှာရှငျးပွလိုတာကတော့ ပြိုမတေို့ရဲ့မိနျးမကိုယျဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ အကျဆဈဓာတျ(ph 4.5)ရှိပွီး Lactobacilli(လကျတို ဘကျဆဲလိုငျ)လို့ချေါတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ ဘကျတီးရီးယားလေးတှလေညျး သဘာဝအလြောကျရှိနပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ ပွငျပဘကျတီးရီးယားနဲ့ပိုးမှားမြားဟာ မိနျးကိုယျထဲ အလှယျတကူဝငျရောကျနိုငျခွငျးမရှိပါဘူး။မိနျးမကိုယျ အမွဲတစကေိုသနျ့ရှငျးစငျကွယျအောငျ ထိနျးသိမျးဖို့ဆိုရငျတော့ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးအလေးထားပွီး…နစေ့ဉျ မိနျးမကိုယျကို ရနေဲ့ အနံ့မပါတဲ့ဆပျပွာနဲ့ သနျ့စငျစှာပုံမှနျဆေးကွောဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။
သနျ့စငျဆေးရညျတှနေစေ့ဉျသုံးတဲ့အခါ ပြိုမတေို့အနနေဲ့ မိနျးမကိုယျအတှငျးထဲထိ သခြောဆေးလိုကျရလို့ သနျ့ရှငျးစငျကွယျသှားမယျလို့ တှေးကောငျးတှေးပါလိမျ့မယျ။လကျတှမှေ့ာတော့ ဒီဆေးရညျတှကွေောငျ့ ပုံမှနျအကောငျးတိုငျးရှိနတေဲ့ မိနျးမကိုယျတှငျးက အကျဆဈဓာတျတှပေကျြပွားလြော့နညျးသှားပွီး ခန်ဓာကိုယျအကြိုးပွုဘကျတီးရီးယားလေးတှေ သသှေားစနေိုငျပါတယျ။ထိုအခါ မိနျးမကိုယျရဲ့ ခုခံစှမျးအားကဆြငျးလာပွီး ပွငျပပိုးမှား ဘကျတီးရီးယားမြားကို ဖိတျချေါသလိုဖွဈပါလိမျ့မယျ။ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျဘာပွသနာမှမရှိတဲ့ ပြိုမတေို့အနနေဲ့ ဒီလိုဆေးရညျတှကေို နစေ့ဉျသုံးဖို့မလိုအပျပါဘူးနျော။
ရာသီစကျဝနျးလှညျ့ပတျခြိနျပျေါမူတညျပွီး သားအိမျခေါငျးမှ ထုတျပေးတဲ့ အခြှဲရညျကွညျလေးတှဟောလညျး သဘာဝပွဲဖဈတာမို့ ဒီလိုအရညျကွညျလေးတှတေဈခါတရံဆငျးတဲ့အခါ အရမျးစိတျမပူဖို့ အားပေးပါရစေ။
အခြှဲရညျလေးတှကေ အကွညျရောငျမဟုတျဘဲ အခွားအရောငျပွောငျးသှားတဲ့အခါ၊ အနံဆိုးဆိုးတှနေံလာတဲ့အခါ၊ မိနျးမကိုယျတှယေားယံလာ ယောငျလာတဲ့အခါမြိုးမှာတော့ ပိုးဝငျခွငျးရဲ့လက်ခဏာတှဖွေဈလို့ ဆရာဝနျနဲ့ပွသငျ့ပါတယျနျော။အကယျ၍ ဆရာဝနျက လိုအပျတဲ့မေးမွနျးစမျးသပျစဈဆေးမှုနဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုပေးအပွီး…ဒီလိုသနျ့စငျဆေးရညျလေးတှေ သုံးဖို့လိုကွောငျးအကွံပေးခဲ့သညျရှိသျော ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုထိသာ သုံးစှဲဖို့နဲ့ မိမိသဘောနဲ့မိမိ ရရှေညျသုံးစှဲဖို့ မသငျ့ကွောငျး
မေ (ဆေး ၂)
ပျိုမေတို့မမေးရဲတဲ့ ပျိုမေတို့အကြောင်း (၂)
' အမျိုးသမီးသုံးသန့်စင်ဆေးရည်တွေ နေ့စဉ်သုံးဖို့လိုအပ်ရဲ့လား?'
ပျိုမေတို့ရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ အမျိုးသမီးသန့်စင်သုံးဆေးရည်တွေရှိနှင့်နေပြီလား?
ဒီဆောင်းပါးလေး အဆုံးထိဖတ်ပြီး အမျိုးသမီးသုံးသန့်စင်ဆေးရည်တွေ နေ့စဉ်သုံးသင့်/မသုံးသင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါဦးနော်!
ပထမဦးစွာရှင်းပြလိုတာကတော့ ပျိုမေတို့ရဲ့မိန်းမကိုယ်ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အက်ဆစ်ဓာတ်(ph 4.5)ရှိပြီး Lactobacilli(လက်တို ဘက်ဆဲလိုင်)လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားလေးတွေလည်း သဘာဝအလျောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ပြင်ပဘက်တီးရီးယားနဲ့ပိုးမွှားများဟာ မိန်းကိုယ်ထဲ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မိန်းမကိုယ် အမြဲတစေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရင်တော့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအလေးထားပြီး...နေ့စဉ် မိန်းမကိုယ်ကို ရေနဲ့ အနံ့မပါတဲ့ဆပ်ပြာနဲ့ သန့်စင်စွာပုံမှန်ဆေးကြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သန့်စင်ဆေးရည်တွေနေ့စဉ်သုံးတဲ့အခါ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ မိန်းမကိုယ်အတွင်းထဲထိ သေချာဆေးလိုက်ရလို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်လို့ တွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်။လက်တွေ့မှာတော့ ဒီဆေးရည်တွေကြောင့် ပုံမှန်အကောင်းတိုင်းရှိနေတဲ့ မိန်းမကိုယ်တွင်းက အက်ဆစ်ဓာတ်တွေပျက်ပြားလျော့နည်းသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေ သေသွားစေနိုင်ပါတယ်။ထိုအခါ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ခုခံစွမ်းအားကျဆင်းလာပြီး ပြင်ပပိုးမွှား ဘက်တီးရီးယားများကို ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ပုံမှန်ဘာပြသနာမှမရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ဒီလိုဆေးရည်တွေကို နေ့စဉ်သုံးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနော်။
ရာသီစက်ဝန်းလှည့်ပတ်ချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းမှ ထုတ်ပေးတဲ့ အချွဲရည်ကြည်လေးတွေဟာလည်း သဘာဝပြဲဖစ်တာမို့ ဒီလိုအရည်ကြည်လေးတွေတစ်ခါတရံဆင်းတဲ့အခါ အရမ်းစိတ်မပူဖို့ အားပေးပါရစေ။
အချွဲရည်လေးတွေက အကြည်ရောင်မဟုတ်ဘဲ အခြားအရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါ၊ အနံဆိုးဆိုးတွေနံလာတဲ့အခါ၊ မိန်းမကိုယ်တွေယားယံလာ ယောင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ ပိုးဝင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါတယ်နော်။အကယ်၍ ဆရာဝန်က လိုအပ်တဲ့မေးမြန်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုပေးအပြီး...ဒီလိုသန့်စင်ဆေးရည်လေးတွေ သုံးဖို့လိုကြောင်းအကြံပေးခဲ့သည်ရှိသော် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသာ သုံးစွဲဖို့နဲ့ မိမိသဘောနဲ့မိမိ ရေရှည်သုံးစွဲဖို့ မသင့်ကြောင်း
မေ (ဆေး ၂)
Astaxanthin (Powerful antioxidant)